Lighted 8x Mirror
၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၆-၀၁-၂၀၁၇ ထိ
ဤဆုအား GCMoney(1500) ဖြင့် ကံစမ်းပါ။
Rocket Online Shopping ၏ လိပ်စာ
Address: Heldan, Kamayut Township Yangon, Myanmar.
&phone;: 09264686461 , 09784419691 , 09961127000
Gmail : rocketonlineshopping@gmail.com
Website : http://www.rocketonlineshopping.com/
Facebook Page : https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/
Rocket Online Shopping ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Rocket Online Shopping မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Rocket Online Shopping မှ အလှပြင် မှန်ဘီလူး (Lighted 8x Mirror/ Swivel Brite) အား ကံထူးရှင် တစ်ယောက်အတွက် မဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Rocket Online Shopping မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
အလှပြင်မှန်ဘီလူး (Swivel Brite)
Sis တို. လွယ်ကူစွာ အလှပြင်ဖို.၊ ကိုကိုတို. မီးမှောင်ထဲ လွယ်ကူစွာ အမွေးရိတ်နိုင်စေဖို.အတွက် အလှပြင် မှန်ဘီလူးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ LED မီးသီးကို AA ဓာတ်ခဲသေး ၂လုံးဖြင့် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Plug ထိုး စရာ မလိုအပ်တော့ပါ။ မှန် မှာ ချိတ်ဖို.လည်း Video ပါအတိုင်း မှန် ချိတ်စရာ ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း 17,000 (၅ဆ ချဲ.ပေးသည်။) တစ်ပတ် ထပ်စောင့် ရပါမယ်။ 15,000 (၈ဆ ချဲ.ပေးသည်။) instock ။ (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အားလုံးကို ပို.ခ ၃ထောင် ကျပါတယ်။ ၂ခုဝယ်ရင် Free ပို.ပေးပါတယ်။ ကျန်မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ခဲ နှစ်လုံး ထည့်သုံးရမယ့် မျက်တောင်ကော့စက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အပူပေးကာ မျက်တောင် ကော့ပေးမဲ့ စက်လေးပါ။ ဈေးနှုန်းကလည်း ၇ထောင်ကျပ်ဆိုတော့ အခုပင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတော့။ (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အားလုံးကို ပို.ခ ၃ထောင် ကျပါတယ်။ ကျန်မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
V Shape မျက်နှာလေး ပိုင်ဆိုင်စေဖို့
မျက်နှာ၊ ပါးနဲ. လည်ပင်းမှ အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ.ကို မိနစ် ၂၀လောက် အချိန်ပေးရုံပါဘဲ့။ နှာခေါင်းကိုလည်း ချွန်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အရေးကြောင်းများ ကင်းဝေးစေမယ့် Energy Beauty Bar ကို အခုဘဲ့ ဖုန်းဆက်မှာယူလိုက်ရအောင်။ အသုံးပြုပုံ အသုံးမပြုခင် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ Video ထဲကအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှာတံပေါ်လိုသူများက နှာခေါင်းအောက်ခြေက ဘေးတဖက်သို့ ညင်သာစွာ တွန်းပေးပါ။ မျက်နှာမော့ပြီး အောက်က အပေါ်သို. ပင့်တင်လိုက်ရင် မေးနှစ်ထပ် ဖြစ်စေပါတယ်။ မျက်လုံးအစ်တာ ပျောက်စေချင်ရင်တော့ တုန်ခါမှုအနည်းဆုံးထားပြီး၊ အပြင်မှ အတွင်းသို. ဖြေးညင်းစွာ ဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း – ၁၅၀၀၀ ကျပ် ။ **သုံးပတ်အတွင်း သိသာပါတယ်။** ဝယ်ယူချင်ရင် ဖုန်းလေးသာ ဆက်ပေးပါ။
Fresh cosmetic set
Fresh တံဆိပ် Cosmetic set ကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဈေးနှုန်း – ၁သောင်း၇ထောင်။ Delivery fee - ရန်ကုန်မြို.တွင်း – ၂ထောင်ကျပ်။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် – ၃ထောင်ကျပ်။ မန္တလေး၊ မြိတ်၊ မော်လမြိုင် အိမ်အရောက် ၄၀၀၀ကျပ်။ တခြားမြို.များကိုတော့ ရန်ကုန်ကားဂိတ်အထိသာ ပို့ပေးပါတယ်။
Sisတို.အတွက် အလှပြင် ခုံ
အလှပြင် ပစ္စည်းနဲ. အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အများအပြား ဝယ်ထားကြသော sis တို.အတွက် အလှပြင်ခုံအသေးလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ သေးသေးလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာများများ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းအများအပြားကိုတော့ စနစ်တကျ စီစဉ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မှန်လေးလည်းပါတော့ တကူးတက မှန်လိုက်ရှာစရာ မလိုတော့ပါ။ ဝယ်ယူလိုပါက ဖုန်းလေးသာ ဆက်လိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း – 12000။ ရန်ကုန်မြို.တွင်းနဲ့ မြို့ပြင် – ၂ထောင်။ မန္တလေး၊မြိတ်၊ မကွေး နဲ.မော်လမြိုင်ကို အိမ်အရောက် ပို.ခ ၅ထောင် ပေးရပါမယ်။ တခြားမြို့များကိုတော့ ရန်ကုန်ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင် ပေးနိုင်ပါမယ်။ အထူး Promotion သုံးသောင်းအထက် ဝယ်ပါက ၃ထောင်တန် Touch pen တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ (လက်ကျန် ပစ္စည်းရှိချိန်အထိသာ)
တစ်ခုတည်းနဲ. ဘက်စုံသုံး ကိရိယာ အလှပြင် Tool လေးတစ်ခုကို sis တို.နဲ. အမြဲ မခွာ ယူသွားချင်ပါသလား။ သေးသေးလေးမို. sis တို. အိတ်လေးထဲ အလွယ်တကူ သယ်ယူလို. ရပါတယ်။ လက်ဆောင် ပေးဖို.လည်း သင့်တော် တယ်နော်။ တစ်ခုတည်းနဲ. လုပ်ဆောင်ချက် ၅ခုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်လေးကို video လေးဖွင့်ကြည့်ပေးပါ။ အသားအရေကို မပျက်စီးအောင် အနူးအညံ့ဆုံး ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆဲလ် အသေတွေလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်နော်။ ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ အသားအရေကို နူးညံ့အောင် ပြုလုပ်နိုင်သလို အလှကုန် cream များကိုလည်း မျက်နှာပေါ်အနှံ. နေရာလွတ် မကျန်ရလေအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင် နှိပ်နိုင်တဲ ကိရိယာလေးလည်း ပါမှာပါ။ ဈေးနှုန်း – ၇၀၀၀ ကျပ်။ ပို့ခ မြို.တွင်း – ၂ထောင်(ရန်ကုန်)၊ မြို.ပြင် – ၃ထောင်(ရန်ကုန်)၊ မန္တလေး – ၅ထောင်၊ မြိတ် – ၄ထောင်၊ ဧပြီလ ၂၀၁၆ မှစ၍ ၂သောင်း ၅ထောင် အထက်ဝယ်ယူသော customer အားလုံးကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့ ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။ (Yangon / Mandalay / Mawlamyine and Myeik)
အမျိုးသမီးများအတွက် Yes အမွေးရိတ်စက်
အမွှေးရိတ်စက်ကလေးပါ auto sensor ပါဝင်ပြီး အရမ်းအရေအသွေး အဆင့်မြင့်ပါတယ်နော် မည်သည့် အသက်အရွယ် မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖိပြီး ဆွဲရုံနဲ. အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါမယ်။ နာကျင်မှု မရှိဘဲ ခေါင်းမှအစ ခြေ အဆုံး အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ မှာယူချင်ပါက ဖုန်းလေးသာ ဆက်လိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း – ၂၉၀၀၀ ကျပ်။ (Delivery free in Yangon) မန္တလေး၊ မော်လမြိင်၊ မကွေး၊ မြိတ်ကို အိမ်အရောက်ပို့ခ ၃ထောင် ပေးရပါမယ်။ ၂ခု ဝယ်ရင် အခမဲ့ ပို့ပေးပါတယ်။ ကျန်မြို့များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူး Promotion သုံးသောင်းအထက် ဝယ်ပါက ၃ထောင်တန် Touch pen တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ (လက်ကျန် ပစ္စည်းရှိချိန်အထိသာ)